Inona ireo torohevitra 4-5 ambony ho an'ireo bilaogera? - Aza manomboka raha tsy azonao antoka fa manolo-tena ianao ary hanafaka. Midika izany fa manana lohahevitra bilaogy vitsivitsy ianao, manoratra tsy tapaka ary ianao aza mijanona. Aza miverimberina mamorona fitaovana marketing fotsiny - valio ireo fanontaniana izay tadiavin'ny vinavinanao sy ny mpanjifanao. Zahao ny nalefa fampirimana ho an'ny hevitra momba ny atiny lehibe. Hamarino tsara fa manana làlana hiroso amin'ny mpanjifanao lalindalina kokoa ianao - io dia antso ho amin'ny hetsika eo amin'ny sisin-dàlana izay manondro ao amin'ny pejy fandraisana miaraka amin'ny mombamomba anao na nomeraon-telefaona hanaovana orinasa. Aza avela kisendrasendra ny fanatsaranao karoka - ny sehatra, ny lohahevitra ary ny atiny rehetra dia mila hamboarina mba hahafahan'ny motera fikarohana manondro ny atiny ary miakatra amin'ny valin'ny fikarohana ianao ho an'ireo lohahevitra mifandraika amin'ny orinasanao.
Ahoana ny amin'ny famaliana ireo fanontaniana atahoran'izy ireo? Tena mpitarika izany eritreritra izany… Eny, misy izany ary hitondra ny fahefana izy io. Betsaka ny olona manoratra ny bilaoginy amin'ny feo tsy madio tanteraka. Ny fifamaliana sy ny fanaovana ny marina dia hanosika ny resaka ary hanome ny mpamaky zava-misy fa sady marina ianao no misokatra. Anisan'izany ny fanoratana lahatsoratra momba ny tsy fahombiazanao ary koa ireo fahombiazanao. Isika rehetra dia te-hiara-hiasa amin'ny tena olona ary fantatsika fa samy mitolona indraindray isika rehetra. Ny fahafantarana ny fomba handresen'ny orinasanao ny tsy fahombiazana dia mety hitondra fanantenana betsaka kokoa amin'ny orinasanao. Mamelombelona ny fahamarinana ary ny lohahevitra henjana no hitondra ny fahefana!
Torohevitra tsara. Nahazo aingam-panahy ny maheno anao mizara ny fahalalanao.
Mahasosotra ny isan'ny vitsy "mahazo". Tohizo ny asa tsara.